UWSLF oo Daalo Gaadmo ah la Beegsatay Ciidamada Gumaysiga Itobiya – Rasaasa News
Jun 10, 2009 Ogaden, ONLF, Somali Galbeed, UWSLF
Dhanan – Ogaden [June 10, 2009] – Wararka naga soo gaadhaya dhanka Mujaahidiinta S/galbeed ayaa sheegaya in uu dagaal culusi ku dhexmaray iyaga iyo Ciidmadda Gumaysiga Itoobiya, meesha lagu magacaabo Hora-shagax oo ka tirsan Dagmada Dhanaan ee gobalka Godey.
Dagaalkan ayay Mujaahidiintu sheegeen in ay Jidka u galeen Ciidamada Gumaysiga, waxayna sheegeen in ay halkaas ugu gaysteen khasaare xoog leh, mana jiraan dhanka Mujaahidiinta wax khasare ah oo ka soo gaadhay dagaalkaasi ay la galeen Ciidamadda Woyyanaha ee dhulka S/galbeed Gumaysiga u jooga, sida ay noo sheegeen Mujaahidiintu.
Dagaalkan waxaa noo xaqiijiyay mid ka mid ah Saraakiisha Mujaahidiinta Midowga Jabhadda Xoraynta S/galbeed, kaas oo sheegay in uu dagaalkani ahaa mid gaadmo ah oo ay wada u galeen Ciidanka gumaysiga, waxayna Mujaahidiintu sii kordhiyeen bilihii ugu dambeeyay howlgalada ay kula dagaalamayaan ciidamadda gumaysiga ee dhulkooda xooga ku jooga.
Waxay sheegayaan Mujaahidiintu in ay Ciidanka gumaysiga mar walba goobaha dagaalka ugu gaystaan Khasaare Xoog leh, Hawl galadooduna u badan yihiin kuwo qorshaysan oo ah nooca loo yaqaano ku dhufo oo ka dhaqaaq, taas oo waxbadan yaraysay khasaaraha gaadha dhanka Mujaahidiinta.
Arimaha Dagaalada Geeska Afrika